Export Tutorials - MyanTrade
ပြည်ပသို့ ကုန်စည်တင်ပို့ခြင်းဖြင့် သင်၏လုပ်ငန်းကို တိုးချဲ့ပါ
(Expand your business by exporting)
ပြည်ပသို့ကုန်စည်တင်ပို့ခြင်းသည် လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ခြင်း၊ စွန့်စားမှုနယ်ပယ်များကို ဖြန့်ကျက်ခြင်းနှင့် ပြည်တွင်း စျေးကွက် အပေါ်၌သာ မှီခိုနေရသည်ကို လျှော့ချခြင်းတို့အတွက် အကျိုးအမြတ်ရှိသော နည်းလမ်း တသွယ်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ယနေ့ကာလတွင် ကုမ္ပဏီကြီးငယ်မရွေး ၄င်းတို့၏ ကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ကမ္ဘာအနှံ့သို့ ယခင်ခေတ်များထက် ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားလာ နိုင်ကြပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးမှာ ပွင့်လင်းလာသည်နှင့်အမျှ အခွင့်အလမ်းများမှာလည်းကျယ်ပြန့်လာပါသည်။ သို့ရာတွင် အတက်မြန်လျှင် အကျမြန်တတ်သည့် သဘာဝကိုလည်း သတိချပ်သင့်ပါသည်။ လုပ်ငန်းအစီအစဉ် ချမှတ်ခြင်း၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ချေများကို ခန့်မှန်း တွက်ချက်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သမျှ ကဏ္ဍပေါင်းစုံရှုထောင့်ပေါင်းစုံတို့ကို သုံးသပ်ခြင်း စသည်တို့ကို လစ်ဟာမှုမရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဤကဏ္ဍတွင် ပြည်ပသို့ ကုန်စည်တင်ပို့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော လမ်းညွှန်ချက်များ ကို တစ်ဆင့်ခြင်း တင်ပြထားပါသည်။
(This section will guide you step-by-step through exporting:)
(၁)ပြည်ပပို့ကုန်လုပ်ငန်းအတွက် အသင့်ပြင်ဆင်ခြင်း (Getting ready for export )
Learn the basics of what it takes to export and assess where you stand
(၂) ပြည်ပပို့ကုန်ဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ (Export strategy)
An export strategy is an essential component of your business plan. Find out how to devise successful export strategy ...
(၃) စျေးကွက်သုတေသန ပြုလုပ်ခြင်း (Market research)
Market research forms the backbone of successfully selling your product abroad. Learn about collecting reports, ...
Promote yourself and your company well by leavingalasting impression
5. Export pricing and getting paid
Working out the right pricing, the way you provide quotes for your goods and when and how you get paid are crucial at an early
6. (ငွေကြေးဆိုင်ရာ)ဆုံးရှုံးနိုင်မှု အန္တရာယ်များကိုခန့်မှန်းတွက်ဆခြင်း (Risk Management)
Learn about the possible risks you face and how to plan to protect your investment against such risks
7. Financing Exports
9. Agents and Distributors